Momba anay - Shenzhen Sinsche Technology Co., Ltd.
Ny ekipanay tena mahay dia manana traikefa an-taonany maro amin'ny sehatry ny siansa indostrialy, ny simia an-tsekoly ary ny injeniera. Avy amin'ny foibe iraisam-pirenena any Shenzhen Guangdong, dia manolotra ny varotra manerantany sy ny fanohanana ara-teknika izahay, Laboratoara fikarohana sy fampandrosoana, kojakoja fanofanana, fanamboarana ary fanodinana trano. Ireo biraom-paritra sy ireo masoivoho miavaka dia voatondro ihany koa ary voafidy hanolotra fiofanana eo an-toerana, fanampiana ara-teknika ary fivarotana isam-paritra.
Ao Sinsche, izahay dia miezaka mba hahatratra ny fenitra farany azo atao amin'ny fiezahana hihoatra ny andrasan'ny mpanjifanay. NYISO9001: 2015 Ny fanamarinana dia manome antoka fa manolo-tena amin'ny kalitao sy ny fiarovana ny vokatra izahay, miantoka ny vokatra azo, amin'ny ora ara-potoana ary amin'ny vidin'ny fifaninanana, ary farany, miantoka fa tsy ho nokapohina amin'ny serivisy ho an'ny mpanjifa, ny fiofanana momba ny vokatra ary ny fanampiana maharitra aorian'ny fivarotana. .
Ny iraka ataontsika: miantoka ny kalitaon'ny rano ho an'ny olona manerantany.
Avy amin'ny foibenay any Shina izahay dia mitantana tamba-jotra iraisam-pirenena momba ny varotra, ny R&D, ny orinasa mpamokatra entana ary ny fanapariahana foibe mba hamolavolana, hamolavolana ary hamokarana fitaovana avo lenta ho an'ny famakafakana rano.
Manolotra vahaolana turnkey izahay amin'ny famakafakana rehetra sy ny filanao fanaraha-maso ary amin'ny fampiasana ny ekipa manam-pahaizana manokana anay dia hiara-miasa aminao izahay hahatakatra ny zavatra takinao, hanome ny vahaolana ary hanaraka ny fanohanan'ny kilasy voalohany ary rehefa mila izany ianao.
Ny fanadihadianay sy ny fikarohana ataonay momba ny famakafakana ny rano dia nahatonga ny fivoaran'ny fitaovana Portable, Laboratoara ary an-tserasera ho an'ny fanandramana marina ireo masontsivana samihafa hita ao anaty rano.
Ny fampiasam-bola mitohy amin'ny mpiasa sy fotodrafitrasa momba ny fikarohana sy ny fampandrosoana dia miantoka ny fijanonantsika eo am-piandohan'ny teknolojia eo amin'ny sehatra misy antsika.